အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်း Juneau, ငါ့ကိုအနီး AK လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ
ထိပ်တန်းအလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်း Juneau, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး alaska လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-200-3292 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, သင်အလိုရှိသောအခါသင်ပျံသန်း, သင်သည်သင်၏လေယာဉ်များနှင့်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းကိုရှေးခယျြ, သင်အစာစားချင်သမျှကိုရှေးခယျြ, သင်ပုန်းတွင်ရှိသည်ဖို့လိုခငျြဘယ်သူကိုဆုံးဖြတ်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သငျသညျအချိန်မီထုံးစံ၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာမှပိုမိုနီးကပ်စွာဆင်းသက်. အဲဒီလွတ်လပ်မှုရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းအကြွင်းမဲ့အာဏာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှား Juneau Alaska ပျံသန်းဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျအစဉ်အမြဲခက်ခဲစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုရှာဖွေပါနဲ့? ဒါပေါ့, သငျသညျဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ချင်သူ prying မျက်စိရှိပါတယ်. သင့်စကားဝိုင်းများကိုနားထောင်ပါလိမ့်မည်သူကိုလူအတော်များများရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တစ်ဦးစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်း၌ရှိကြ၏အခါသင်တောင်မှလျှို့ဝှက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုင်ထားလို့မရဘူး. သငျသညျအထကျနှစျယောကျကိစ္စရပ်များကိုယူဆရန်ဆုံးဖြတ်ရင်တောင်နေဆဲငိုအမြိုးသားအထံမှဆူညံသံရှိလိမ့်မည်, အဆိုပါလူကြီးများငြင်းခုံခြင်းနှင့်တဲ့အခါမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်သေံအတွက်စကားပြောပုံကိုသိကြဘူးသူတွေကို.
Juneau Alaska ရှိငှားပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်နှင့်အတူ, သငျသညျအထကျပါကိစ္စများအပေါငျးတို့သတွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်. ထို့ကြောင့်, သငျသညျအလုပျမှစုစုပေါင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်. ရှိပါလိမ့်မည် 100% ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့သောသင်လျှို့ဝှက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျလက်ဖက်ရည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တပ်မက်သလား? သင်သည်သင်၏ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်း Haute အစားအစာရှိသည်ဖို့ချင်ပါနဲ့? သင်တို့ပြေးစဉ်အတွင်းမီနူးလုံးဝကိုသင်တက်ဖြစ်. တောင်မှစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်း၏တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, သငျသညျစိတ်ကြိုက်၏ဤအဆင့်အထိကိုတွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်.
သင်က Want အဘယ်မှာရှိမြေဖို့လွတ်လပ်ခွင့်
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသင်ချင်တယ်ဘယ်မှာမှပယ်ယူနှင့်သင့်လိုချင်သော destination သည်မှာမြေယာလိမ့်မယ်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုချွတ်ယူနိုင်ပါသည်ရှိရာကနေအများအပြားအသေးစားလေဆိပ်ရှိပါတယ်. ဒါကအဓိကလေဆိပ်များနှင့်ကြာမြင့်စွာစီတန်း၏ကြောပိတ်ဆို့မှုရှောင်ရှားဆိုလိုတယ်, ထိုကွောငျ့, အချိန်ချွေတာနဲ့သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှာအစောပိုင်းရောက်ရှိလာ.
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားမြင့်မှာပျံသန်းပါလိမ့်မယ်, မိုဃ်းကောင်းကင်စည်ကားမဟုတ်သည်အဘယ်မှာရှိ. သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေမည်နှင့်တစ်ဦးအမြန်ပျံသန်းလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်.
အဆင်မပြေရှောင်ဖယ်ကာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုရှေးခယျြခွငျးအားဖွငျ့လွတ်လပ်မှုကိုလက်ခံ. ပုဂ္ဂလိကပျံသန်းအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်, အဆင်ပြေ, စည်းစိမ်ကြီသော, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, မြန်ဆန်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အစဉ်အဆက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ. နောက်ဆုံးမိနစ်ငါ့ကိုအနီးဗလာခြေထောက်လေယာဉ်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည် Juneau Alaska.
Juneau အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ပိုင်သောမြို့ဖြစ်၏, ခုနစျပါးရေမိုင်အနောက်မြောက်ဘက် Juneau ၏ဗဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရိုင်တွင်တည်ရှိသောအများပြည်သူအသုံးပြုမှုလေဆိပ်နှင့်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း, အဆိုပါ U.S တစ်မြို့နှင့် borough.
Juneau, Auke ဂလားပင်လယ်အော်, ဒေါက်ဂလပ်, Hoonah, Gustavus, Tenakee Springs, Angoon, Elfin Cove, ငှက်ကြီးစံပို, Haines, Skagway, Sitka, http://www.juneau.org/airport/